I-mole iyindawo encinane kwesikhumba, okanye i-convex ukwakheka ngefowuni, umbala obomvu. Ezinye ii-moles ziyakhanga, abanye, ngokuchaseneyo, sizifihla ngokucokisekileyo phantsi kweengubo. Bavela phi? Ngaba iicolesi ziyingozi kangaka? Ingaba kuyimfuneko ukujongana nogqirha, okanye ukuba ungabandakanyeli kubo?
Kukho izibhengezo zokuzalwa kubo bonke abantu. Ezinye zikhona ukusuka ekuzalweni, ezinye zivela ngexesha lobomi. Iimpawu zokuzalwa zihlala zidibene kwaye zidibanisa. Kukholelwa ukuba iimpawu zokuzalwa ezizalisekileyo aziyingozi. Abachaphazeli iimpahla, izandla, okanye idibanisi. Akukho nto inokubangela ingxaki yokuzalwa enjalo. Iimpawu zokuzalwa ezixubileyo, ngakumbi xa zikhona, ezandleni, entanyeni, ubuso, intloko, ngolu hlobo, zimela ingozi ethile. Ii-Moles nazo zincinci, ziphakathi kwaye zinkulu. Amancinci (ububanzi ukusuka ku-1 ukuya kwi-15 mm) ngokuqhelekileyo akabangeli nto. Kodwa phambi kobude (ukuya kwi-10 cm) kunye nenkulu (10 cm okanye ngaphezulu) i-moles, kuyakufaneleka ukubona ugqirha, njengoko banokukhula ukuba babe yi-tumor. Ngamanye amaxesha inzululwazi ingancoma ukuba kususwe i-mole. Njalo ugcine ingqalelo ekubonakala kwintsha, okanye utshintshe i-moles endala. Qaphela ukuba i-mole yakho:
- ukwanda okanye ukunciphisa ngobukhulu;
- unemibala engalinganiyo, oko kukuthi, ubukho bee-shades ezahlukeneyo;
- unesimo esingavumelekanga (ii-moles eziqhelekileyo zinemilo ye-oval);
i-bleeding, okanye iqalisa ubomvu ngokujikeleza kwayo, ukucaphukisa, ukubetha;
- inezixhobo kunye nezigundane kwiisiseko zayo;
Konke oku kuyingozi kakhulu, ngoko kwimeko enjalo kubalulekile ukudibana nodokotela.
Akunjalo na ukuba unako ukususa i-mole! Abanye abantu bakholelwa ukuba unako ukususa ngokwakho ngentambo yelinen. Oku kuyimfundiso engalunganga. Ukuzama ukubopha isiza sokuzalwa kuza kubangela ukukhula okukhawulezileyo kuphela. Kwakhona kuma-pharmacy bathengisa iziyobisi ezahlukeneyo ukususa i-moles, ezingekho nengozi kumzimba. Le mali ayinakwenzeka kukunceda ukulahla isiza sokuzalwa, impembelelo yazo iya kubangela ukutshisa okukhulu. Ngoko ke, ukuzama kanzima ukukrazula i-birthmark, uza kufumana impawu ezimbi kuphela kwesikhumba. Kungcono ukubonisana neengcali, uya kugqiba isidingo sokususa i-birthmark kwaye ukhethe indlela efanelekileyo yokususwa. Ngendlela, zonke iinkqubo zokukhutshwa ngokukhawuleza kwi-moles zikhuselekile kwaye zibuhlungu.
Khumbula, nantoni na yakho yokuzalwa, kufuneka ulandele izicwangciso ezithile:
- Zama ukuphepha iingxaki zokuzalwa, ungabathinteli ngeengubo, hlamba umzimba wakho ngesiponsi esithambileyo. I-trauma ingakhokelela ekusulelekeni okanye ukutshintsha kwe-mole, eyingozi kakhulu.
- Gwema ukukhanya kwelanga ukususela nge-12 ukuya kwe-4 ebusuku, xa ilanga lisebenza kakhulu:
- Sebenzisa i-sunscreen;
- ugweme ukushisa kwelanga;
Ekugqibeleni, ndifuna ukuthetha ukuba nangona kucetyiswa ukuba kube lula njengoko kunokwenzeka nge-moles, akukafaneli ukuhlala kuyo. Kuya kuba mnqabile ukujonga ngugqirha. Yimpilo!
Umzimba kunye noxanduva lokujongana nokuhlamba
Ukunyamekelwa kwesikhumba ebusika. Amanzi acocekileyo ekusebenzeni
I-Horoscope ngoJanuwari, intlanzi, ibhinqa
Indlela yokufumana ubufazi phakathi kwakho?
Intaba ekhukhumeleyo: Tbilisi iyigugu laseGeorgia
Isaladi yamaGrike nenkukhu
I-Cottage cheese casserole kunye neeperesi kunye ne-spaghetti
Ukuxilongwa ngezicathulo. Ziza kuxela ntoni izihlangu?
Abaqalayo beCold ngoMnyaka omtsha 2016, iresiphi kunye nesithombe
Iimvavanyo ezihambelanayo ezimbini
Ubuso obubuyiselwayo buso emakhaya
Ukwesaba kwabantwana ebusuku
Indlela yokugawula i jeans phantsi kwefutshane
Iingubo zokugqoka iimfesane zomtshato zintombi
Ngaba ndingayithenga nge-intanethi?
I-Babushkin iplee nge-sinamoni
I-cosmetology ye-Hardware yomzimba
Ubumnandi bumnandi: ipayipi yamathanga